माइक्रोबसमा भेटिएकी आमाले भन्नुभयो: नानी, बाआमा छोडेर विदेश नजाऊ है | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
माइक्रोबसमा भेटिएकी आमाले भन्नुभयो: नानी, बाआमा छोडेर विदेश नजाऊ है
जेठ २५, २०७६ शनिबार १८:५८:२० | विना न्याैपाने
बाहिर गएर फर्किंदा कतिले जसोतसो पैसा बोकेर आउँछन् भने कति बाकसमा बन्द भएर आउनु पर्छ । कतिको काख रित्तो भएको छ । विदेशको मोहले कतिको सिउँदो पुछिएको छ । अनि कत्तिको घरबार उजाडिएको छ । आफ्नै देशमा काम गर्ने वातावरण बनाउन सकिंदैन ? के नागरिकलाई विदेशी मोहबाट छुटकारा दिनै नसकिने हो र ? यस्ता प्रश्न त धेरै छन्, तर उत्तर पाउन गाह्रो छ ।
June 9, 2019, 4:41 a.m.
बिना जि यात्राको क्रममा भेटियकि आमासंग भयको कुरा पढ्दै गर्दा मन दुखि भयो ।तर यो कुरा लेख्न भुल्नु भयछ कि कयौ छोराछोरीहरू रहर ले यूरोप जान्छन त कयौ गरीबका छोराछोरी एक छाक टार्न र बाबा आमा भाई बैनिका लुगा फेर्नै लागि खाडि जान्छन बाध्यता ले गर्दा बाबाआमा ले नै आफ्नो सन्तानलाई बिदेश पठाउन बाध्य हुन्छन हजुर केबल सहरीया परीबारका सम्पन्न छोराछोरी आफ्नै खुसिले बिदेसियकाको कहानि लेख्नुभयो । कणालि का बिकट गाउ रोल्पा रूकुम जाजरकोट प्यूठान गुल्मि र अर्खखाचि लगायतका बिकट गाउँ मा जानुस त्यहाका परीवारलाई सोध्नुस् छोराछोरी बिदेसिनुको पिडा र बाध्यता बुझ्नु हुन्छ । समग्रमा हजुरको लेख राम्रो छ ।
June 8, 2019, 8:57 p.m.
यो त मेरै कहाँनी ती आमाले भ नि दिए जस्तो लाज्ञो । म ७१ बर्षको भए शृमती ६७ । दुइ छोरा छोरी छन । छोरो अमेरिका गएको ११ बर्ष भो पिएच डि । बिच मा ७ बर्ष पछी एक पटक आयो । छोरी दक्षण कोरियामा गएको पनि ७ बर्ष भो । दुबै इन्जिनियार हुन । मेरो हालत पनि त्यही हो पहिले पैसा न भएर खान पाइन्न थ्यो ऐले पैसा छ तर छोरा छोरी छैनन अफुलाई २-४ कहिलेपनी निको नहुने रोग सुगर्, ब्लड प्रेसर आदी छ । खान हुन्न । केहि भयो भने घर भित्रै मरिन्छ ।कतिदिन आइस मा सुतेपछी पशुपती पुर्याउने हुन । के गर्नु जीवन यस्तै छ ।